Sadax Wasiir oo Maanta xilka kala wareegay Hal Wasiir oo katirsanaa Xukuumadii hore « AYAAMO TV
Sadax Wasiir oo Maanta xilka kala wareegay Hal Wasiir oo katirsanaa Xukuumadii hore
489 Views Date January 28th, 2014 time 12:23 pm
Waxaa Maanta Munaasabad balaaran ay Xilka kula kala wareegayeen Wasiirada cusub ee Wasaaradaha Warfaafinta, Boostada iyo gaadiidka lagu qabtay Xarunta Wasaaradaasi.
Munaasabada Xil wareejinta waxaa goob joog ka ahaa Ra’izul Wasaare kuxigeen ahna Wasiirka Awqaafta iyo arrimaha Diinta Mudane Ridwaan Xirsi Maxamed, Wasiirada Cusub ee Xilalka la wareegayay iyo Wasiirkii hore Wasaarada Warfaafint Boostada iyo Gaadiidka Mudane C/laahi Ciilmooge xirsi .
Munaasabada Xil wareejinta waxaa ka hadlay Wasiirkii hore ee Warfaafint Boostada iyo Gaadiidka Mudane C/laahi Ciilmooge xirsi oo sheegay in Wasaaraddu ay ahayd Wasaarad mug leh, islamarkaana ay jiraan talaabooyin xagga horumarka ah oo la gaaray, waxaana howlwadeenada Wasaaradaha uu xilka maanta wareejiyay kula dar daarmay in si hufan ula shaqeeyaan Wasiiarada cusub, Waxaana uu xilkii Wasaaradda Warfaafinta ku wareejiyay Wasiirka cusub ee Warfaafinta Mudane Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow.
Mustaf Sheekh Cali Dhuxulo Wasiirka Warfaafinta oo isna munaasabadda hadal kooban ka jeediyay ayaa u mahadceliyay Wasiirkii hore ee xilkaasi hayay, isagoo balan qaaday in uu sii dar dargelin doono howlaha Wasaaradda.
Sidoo kale Mudane Ciilmooge waxa uu isla munaasabadda ku wareejiyay xilalka Wasaaradaha boostada iyo Isgaarsiinta iyo sidoo kale Gaadiidka oo uu ku wareejiyay wasiiradii loo soo magacaabay.
Wasiirka cusub ee boostada iyo Isgaarsiinta Mudane Maxamed Ibraahim Xaaji Aadan oo munaasabad hadal ka jeediyay ayaa daboolka ka qaaday in ka shaqeyn doono horumarinta boostada iyo isgaarsiinta.
Waxaa isna xafladda hadal ka jeediyay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Mudane Saciid Jaamac Maxamed Qoorsheel oo ka mahadceliyay intii isaga ka horeysa iyo waxyaabaha ay qabteen.
Ku-xgeenka Ra’isulwasaaraha ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Mudane Ridwaan Xirsi Maxamed oo gabo gabadii munasabadda hadal ka jeediyay ayaa ku bogaadiyay howlwadeenada Wasaaradda in ay si hufan ula shaqeeyaan Wasiirada cusub, isagoo xusay in saddexda Wasaaradood ay ka mid yihiin hay’adaha laf dhabarka u ah dowladda.